धेरै मानिसहरू संसारको फुटबल को तारा बन्ने सपना - सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय खेल हो, त्यहाँ त सबै धेरै आएको। छोराछोरीको गज घन्टा को लागि बल Chase मा, विद्यालय कक्षाहरू बीच खेल्न थालेका छन्, पहिलो प्रतिस्पर्धा विश्वविद्यालयहरु मा बाहिर छ। एक प्रारम्भिक उमेर देखि बच्चाहरु केही आमाबाबुले बच्चा फुटबल प्रतिभा बाहिर हुनेछ भन्ने आशा मा एक फुटबल एकेडेमी तिनीहरूलाई भर्ना, खेल विद्यालय जान थाल्छन्। को कोच - तर यो खेल मा अर्को अत्यधिक सम्मान स्थिति छ। स्वाभाविक, बच्चा कुनै एक तिनीहरू सबै प्रक्रिया मा सिधै मुछिनुभएको हुन चाहनुहुन्छ क्षेत्र बाहिर उभिरहेका को सपना र टोली गतिविधिहरु हेर्न, छैन। तर, यो केवल एक बच्चा छ - उमेर, सबैलाई कसरी महत्त्वपूर्ण यो स्थिति बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले, तपाईं एक फुटबल कोच कसरी बन्न बारेमा विचार गर्नुपर्छ। प्रक्रिया धेरै लामो र कठिन छ, तर तपाईं साँच्चै यो चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आवश्यक सीप र क्षमता छ, त्यसपछि तपाईं सफल हुनेछ। र यो लेख तपाईं एक फुटबल कोच कसरी बन्न बुझ्न मदत गर्नेछ।
शौकिया स्तर कोचिंग मा
तपाईं एक फुटबल कोच कसरी बन्न सिक्न चाहन्छन् भने, त्यसपछि तपाईं Zhoze Mourinu र को स्थिति खतरामा हुँदैन कार्लो Ancelotti। तिनीहरूले फुटबल कौशल र त्यसपछि कौशल कोच honing दशक बिताएका छन् भन्ने तथ्यलाई, अत्यधिक योग्य व्यवसायि, संसारभरि मान्यता बन्न। निस्सन्देह, तपाईंले यस्तो लक्ष्य अगाडि राख्न सक्छ, तर हामी अझै पनि व्यावहारिक दृष्टिकोण चयन गर्नुपर्छ। शौकिया स्तर मार्फत अप जमीन देखि एक कदम र त्यसपछि, सायद, एक पेशेवर गर्न - तपाईंले केही क्लब मा फुटबल एकेडेमी प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि जाने छैन भने, पनि सानो, यो तपाईं को लागि एक कोच बन्ने मात्र तरिका हो। आफ्नो कार्य तपाईं एक प्रारम्भिक उमेर देखि खेल मा थप सक्रिय सहभागी कसरी छ। स्कूलमा फुटबल खेल्न, विश्वविद्यालय स्तरमा फुटबल खेलहरूमा भाग लिन निश्चित हुन। खेलकुद विभाग मा विश्वविद्यालय जान - के तपाईं खेल आफ्नो जीवन बाँध्न कि क्षमता र आत्मविश्वास छ भने। तपाईं साथै तपाईं पैसा कमाउन अर्को विकल्प छ भने, दोस्रो डिग्री बस प्राप्त हुन सक्छ। बस कोचिंग लागि उच्च शिक्षा लागि अवश्य छ कि सम्झना। तपाईं अन्ततः विश्वविद्यालय मा टीम कोच मौका प्राप्त हुन सक्छ, र त्यसपछि माथि जानुहोस् र धेरै उच्च छ। तर, हामी यो एक फुटबल कोच बन्न क्रममा मात्र विकल्प छैन भनेर बुझ्न पर्छ।
प्लेयर गरेको स्तर संग भारोत्तोलन
सबै थाहा छ, व्यावसायिक कोच र खेलाडीको बहुमत थिए, र सबै धेरै बलियो हो। खुलस्त खेल योजना कमजोर भएका धेरै मान्छे, जो तिनीहरूलाई ठूलो कोच बन्न अनुमति दिन्छ, शानदार tacticians, रणनीतिकारों र मनोवैज्ञानिक छन्। कसैले कसरी एक फुटबल कोच छोराछोरीलाई एक पटक ठूलो लिग निशान मा भएका बन्न बारेमा सोच्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं एउटा प्रारम्भिक उमेर मा फुटबल खेल्दै सुरू छ। यो फुटबल एकेडेमी पहिले नै बच्चाहरु पाँच वर्षको देखि लिएर, त्यसैले ढिलो राम्रो छ। एक फुटबल खेलाडी को व्यावसायिक क्यारियर तीस वर्ष पछि सामान्यतया पूर्ण छ, तीस-पाँच बजाउन केही goalkeepers गेट मा र माथि चालीस वर्ष खडा गर्न सक्नुहुन्छ। र त तपाईं पहिले नै आफ्नो कोचिंग स्थिति चयन गर्ने बारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो तपाईं बच्चाहरु वा वयस्क लागि एक फुटबल कोच कसरी बन्न बाहिर आंकडा गर्न खोज्नु, कुरा छैन, तपाईं हुनेछ केही कदम हिंड्न कुनै पनि मामला मा छ।
कोचिंग लाइसेन्स - तपाईं रूस वा अन्य कुनै पनि देशमा एक फुटबल कोच कसरी बन्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक धेरै महत्वपूर्ण कागज आवश्यक छ। यो पेशेवर कोचिंग गतिविधिमा संलग्न सुनिश्चित गर्न व्यक्ति उपयुक्ततामाथि पुष्टि गर्छ जो कागजात छ। तपाईं विशेष कोचिंग पाठ्यक्रम, परीक्षा पछि पारित गर्न आवश्यक हुनेछ - र तपाईंले वास्तवमा तपाईं एक पेशेवर कोच गर्नेछ इजाजतपत्र प्राप्त। र त्यसपछि तपाईँले माथि आफ्नो क्यारियर पथ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईंलाई थाहा छ कि खरोंच देखि एक फुटबल कोच कसरी बन्न। तर तपाईं शीर्ष प्राप्त गर्न अर्को गर्न आवश्यक कदम के हुन्?
तपाईं कसलाई बारेमा तिनीहरूले तपाईं क्लब को एक पौराणिक कथा बन्न छैन भने, आफ्नो देश मा संसारमा सबै, वा कम से कम थाहा उल्लेखनीय प्लेयर, थिएनन् भने, संभावना तपाईं तुरुन्त, टाउको कोच को स्थिति प्रस्ताव गर्न अत्यन्तै सानो छ भनेर हो। त्यसैले, सबै भन्दा उचित कुरा एक सहायक वा सहायक प्रशिक्षक, साथै अन्य कुनै पनि कोचिंग स्थितिहरू तिमी अगाडी काम अनुभव पाउन सक्छौं जहाँ खोज्न छ। अक्सर मानिसहरू पाठ्यक्रम तिनीहरूलाई मौका दिनुहुन्छ जो एक सहायक, रूपमा काम गर्न कोचिंग लाइसेन्स लागि संयोजन लिन "एक ढुङ्गा दुई चरा मार्न।" फलस्वरूप, तिनीहरूले इजाजतपत्र र आधिकारिक एक पेशेवर टीम तालिम अधिकार प्राप्त गर्दा तिनीहरूले प्रभावकारी गर्न आवश्यक विशेषज्ञता हुनेछ।
निस्सन्देह, जो एक कोच बन्न योजना छ हरेक व्यक्ति, च्याम्पियन्स लिग कप र यति मा को टाउको माथि उठाएको संसारमा सबै भन्दा ठूलो क्लब को एक, नेतृत्व गर्न चाहन्छ। को कोच को आवश्यकताहरु छैन त्यसैले उच्च जहाँ सानो टोली संग सबै भन्दा राम्रो सुरुवात कोचिंग गतिविधिहरु - तर तपाईं soberly आफ्नो क्षमताहरु आकलन गर्नुपर्छ। सिर्फ एक हजार मान्छे मार्फत यस्तो Josep Guardiola रूपमा व्यवसायी, तर यो पहिलो कोच "बार्सिलोना" को युवा टोली नेतृत्व भनेर याद गर्न लायक छ। कुनै कुरा के क्लब - त्यसैले केवल टाउको कोच रूपमा काम खोज्छन्। तपाईं प्रतिभाशाली छन् र कौशल छ भने, तपाईं एक कम स्तरमा सफलता हासिल गर्न सक्षम हुनेछ, तपाईं एक ठूलो क्लब को व्यवस्थापन नोटिस सक्छ। वा, तपाईं आफ्नो सेवा प्रदान गर्छन् भने, तपाईंले पहिले नै पोर्टफोलियो हुनेछ।
शीर्ष गर्न आरोहण
फलस्वरूप, तपाईं अविश्वसनीय सफलता हासिल गर्ने मौका छ, तर यो आफैलाई देखि धेरै माग गर्न आवश्यक छैन। कि विश्व-वर्ग कोच मात्र केही सम्झना, र तपाईं एक प्रतिभा छैनन् भने, यो तपाईंले केही बलियो क्लब मा रुचि हुन सक्छ जो सेवाहरूमा राम्रो विशेषज्ञ हुन् भनेर होइन।
स्पेनी सुपर कप - दुई को लागि स्टेशन
नोकिया को पुरानो मोडेल: हाम्रो समय को परभक्षी
त्यहाँ एक बेहोशि औषधि छ, निदाउरोपनको कारण छैन?
मोना लिसा - मानवता को सारा को श्राप
को "स्टार वार्स" प्ले। आफ्नै हात अनुरूप
तपाईंको व्हिस्की कसरी दाढी गर्न